News Collection: प्रविधिमा पनि जिरो साइज
प्रविधिमा पनि जिरो साइज
एउटा खल्तीमा मोबाइल आकारको भिडियो क्यामरा, अर्कोमा पकेट प्रोजेक्टर
कम्मरमा टाँसिएको पातलो ल्यापटप र झोलामा ई रिडर। भौतिक सुविधाका नयाँ प्रविधि तपार्इँको खल्ती र कम्मरमा सजिलै अटाउनसक्छ। तपाईँको जिउको आकार जत्रोसुकै होस्, प्रविधि तपार्इँको ज्यानभन्दा छरितो बनिसक्यो। हो, प्रविधि जिरो साइजमा ढल्दैछ।
सामान्यतया जिरो साइजले स्लिम र सेक्सी युवतीको प्रतिनिधित्व गर्छ। मोडलिङ र फिल्मी करिअर बनाउनेका लागि सबैभन्दा बढी चासोको विषय हुनेगर्छ, जिरो साइज। र, प्रविधि अहिले युवतीको फिगरभन्दा
बाहिर छैन। नत्र भने आइफोन उत्पादक एप्पलदेखि सामसुङका स्मार्ट फोनसम्म साइज घटाउने होडबाजीमा लाग्ने थिएनन्। संख्याको आधारमा सेलफोनमा जिरो साइजले बढी स्थान लिएपनि फोनसेटमा मात्र यो सीमित भने छैन। उपभोग्य प्रविधिहरू सबै स्लिम हुने होडमा छन्।
६.८ एम एम मोटाई भनेको निक्कै कम हो। स्किफ ई रिडर अहिले यही साइजमा उपलब्ध छ। पश्चिमा बजारमा चलेको पत्रिका पढ्ने यो डिभाइसको स्त्रि्कन भने ११. ५ इन्चको छ। झोलाको कुनै कुनामा थोरै ठाउँ भएपनि अटाउने यो डिभाइस लोकप्रिय हुनुमा यो जिरो साइजको हुनु नै हो।
जिरो साइजकै प्रसंगलाई स्थापित गर्नेगरी तयार भएको ल्यापट ब्याग अर्को बलियो उदाहरण हो। राजधानीका सडकमा मोटरसाइकल चढ्नेले चिसो हावा छेक्न लगाउने चेस्ट गार्डकै आकारमा छ, यो ल्यापटप ब्याग। कम्मरदेखि छातीसम्म छोप्नेगरी बोक्न मिल्ने यो ल्यापटप व्याकप्याक बुलेटप्रुफ समेत
हो। कम्मरमा लपक्क टाँसेर हिँड्दा कसैले ल्यापटप बोकेको समेत भेउ पाउन सक्दैनन्। यस ब्यागमा १७ इन्चसम्मको ल्यापटप भिर्न सकिन्छ।
ब्याग नै जिरो साइजमा आइसक्यो भने ल्यापटप पछाडि पर्ने कुरै भएन। हो डेल कम्पनीले ल्याएको ९.९९ एमएम मोटाईको ल्यापटप अहिलेसम्मकै स्लिम साइजको कम्प्युटर हो। पातलो भनेर काम नलाग्नेचाहिँ नठान्नुस्। बजारमा रहेका कुनै पनि ल्यापटपभन्दा यसको क्षमता कम छैन।
ल्यापटपमा प्रयोग हुने गरी तयार गरिएका हार्ड ड्राइभहरू अहिले पोर्टेबल हार्ड ड्राइभका रूपमा खुबै चलेका छन्। २.५ इन्चमा सिगेट ब्रान्डको पोर्टेबल हार्ड ड्राइभ बजारमा आएको छ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा पातलो हो। खल्तीमा खुसुक्क हाल्नसकिने भएकाले यसको लोकप्रियता दिनानुदिन बढ्दो छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा स्लिम हुने क्षेत्र यसरी फराकिलो भयो कि टेलिभिजन र मनिटरहरूका लागि घरमा टेबुल र टिभी केसकै आवश्यकता नपर्ने हुनथालेको छ। जिरो साइज हुनासाथ टपक्क भित्तामा टाँसिन थालेका छन् टेलिभिजनहरू। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने मोनिटरको पातलो हुने क्रमले प्रयोगकर्तालाई लोभ्याइसकेको छ। १५ एमएम आकारको बेनक्युको एलइडी मनिटर अहिलेसम्मकै पातलो मनिटर हो। गुणस्तर? ढुक्क हुनुस्। यो जस्तोसुकै हाई डेफिनेसन पिक्चरसमेत सजिलै हेर्न सकिने मनिटर हो। राख्न सजिलो हुने भएकाले पनि यसको बजार ह्वात्तै बढेको छ। अझ तपार्इँसँग पकेट प्रोजेक्टर छ भने यस्ता टिभी वा मनिटरसमेत चाहिन्न। कुनै पनि सफा भित्तामा प्रोजेक्टरको लाइट फ्याँक्नुस्, तपार्इँको जिरो साइजको भित्तो नै मनिटर या टेलिभिजन बन्छ। नेपाली बजारमा १५ हजार रुपैयाँदेखि पाइन्छन् यस्ता प्रोजेक्टर।
जिरो साइजको यो दौडमा भिडियो क्यामरा पनि सहभागी छ। तपार्इँ १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने बजारमा सबैभन्दा गुणस्तरीय भिडियो खिच्ने क्यामरा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि खल्तीमा अटाउने। मोबाइल आकारका यस्ता एचडी क्यामराले परम्परागत भिडियोग्राफीलाई चुनौती दिएका छन्। होम भिडियोका लागि जिरो साइजका यस्ता प्रडक्ट निक्कै उपयोगी साबित भइसके।